Izindaba - u-Hebei Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. wamukela ngemfudumalo amakhasimende aseRwanda ukuba avakashele
U-Hebei Lihua Pharmaceutical uphendula ngenkuthalo inqubomgomo kazwelonke ye- "Belt and Road" futhi anweba ngamandla izimakethe zaphesheya kwe-Afrika. Ekuseni ngo-Ephreli 22, ikhasimende laseRwanda kabahizi leza enkampanini yethu lizovakashela futhi lixoxe ngezinto zokubambisana. Umphathi jikelele wenkampani i-Ning Zhenxing, umphathi womnyango wezohwebo wezangaphandle u-Liu Hailiang, umphathi womnyango osezingeni u-Yao Weiwei nabanye bazwakalise ukwamukelwa okufudumele ekufikeni kwabangane bamazwe aphesheya. Amakhasimende aseRwanda ahlola ikakhulukazi ulayini wokukhiqiza wenkampani yethu. Ngokuhlolwa kwesayithi kwemikhiqizo yenkampani nezinqubo zokukhiqiza, amandla kaLihua jikelele abonakale kakhulu .
Amakhasimende anokuqonda okuhlelekile futhi okuphelele kwesikali esikhona senkampani yethu, ukwakheka komkhiqizo nesimo sasemakethe. Ngemuva kwalokho, umphathi womnyango wezohwebo wangaphandle uhola ikhasimende ukuthi livakashele izingqungquthela zokukhiqiza. Ngesikhathi sokuvakasha, ngakolunye uhlangothi, balalele ngokucophelela ukwethulwa kwethu kwi-workshop nemikhiqizo yayo, ngakolunye uhlangothi, babeka imibono yabo kanye nemibono yabo ngezikhathi ezithile.
Ngemuva kokuhlola isiza nemikhiqizo, izinhlangothi zombili ziphinde zaqhuba izingxoxo zobungani zokubambisana okulandelayo. Ikhasimende lithe lolu hambo alukwazi ukuqonda inkampani kuphela, kodwa futhi lubavumela ukuthi basebenzisane noLihua ngokuzethemba nangokuzethemba okukhulu. Ngaphezu kwalokho, baphinde baveza ukuthi bafuna ukusungula ubudlelwano besikhathi eside bokubambisana nenkampani yethu, futhi banethemba lokuthi sizoqhubeka nokubanikeza imikhiqizo nezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme, futhi sithemba ngobuqotho ukuthi lezi zinhlangano zombili zingaqinisa ukubambisana futhi zithuthukisane ezindaweni eziningi.